Ciidamo kala taabacsan Farmaajo iyo mucaaradka oo Ku dagaalamay Sh/dhexe. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ciidamo kala taabacsan Farmaajo iyo mucaaradka oo Ku dagaalamay Sh/dhexe.
On May 18, 2021 308 0
Dagaal qaraar ayaa maanta ka dhacay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Balcad kaasoo dhex maray ciidamo kala taabacsan DF iyo kuwa mucaaradka ah oo dhawaan ka gadooday muddo kororsiga Farmaajo.
Sida ay inoo sheegeen ilo xog ogaal ah dagaalkan ayaa waxaa dagaalkan yimid kadib markii ay labada ciidan isku qabsadeen gaari Beebe ah oo ay horey mujaahidiintu ugu qarxiyeen inta u dhaxaysa Balcad iyo Caliyaale.
Cciidan uu watay Sargaal lagu magacaabo kornel Sanay Cabdulle oo ka mid ah Saraakiisha Mucaaradka ayaa isku dayay in ay soo jiitaan gaariga balse kuwa taageersanaa Farmaajo kana tirsan maamulka degmada Balcad ayaa isku dayay in ay is hor istaag ku sameyaan jiidashada gaariga, waana arrinta sababta in gacanta la isula tago oo la dagaalamo.
Labada dhinac ayaa muddo dagaalamayay galabta iyagoo isku adeegsaday hub culus iyo mid fudud waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dadka degaanka Caliyaale ayaa sheegaya in ciidankii uu watay sargaalka lagu magacaabo Sanay Cabdulle laga dilay 3 Askari, sidoo kalana laga soo furtay qoray PKM-ah iyo dhowr qori AK47-ah.
Ciidanka maamulka Balcad waxaa iyagana ka dhaawacmay dhowr askari, hase ahaatee ugu dambeyn askartii mucaaradka ahaa waxaa u suura gashay iney jiitaan gaarigii Beebaha ahaa ee uu dagaalku sababtiisa u dhacay.
Wararka naga soo gaaraya aagaga dagaalka ayaa sheegaya in labada ciidan ay wali isku hor fadhiyaan halkii ay ku dagaalameen, daqiiqad iyo saacad walbana waxaa la filan karayaa dagaal iyadoo haatan ay wadaan qeyla dhaan iyo isku hub uruursi.